Real Madrid Cayaaryahan muhiim ah oo qaliin lagu Samayn doono? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid Cayaaryahan muhiim ah oo qaliin lagu Samayn doono?
(25-9-2018) Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in uu dhaawac soo gaaray mid ka mid ah Cayaartoyda muhiimka ah ee Naadigaas kaas oo qaliin lagu samayn doono mudana Garoomada ka maqnaan doona.
Cayaaryahanka Real Madrid ee qaliinka lagu Samayn doono ayaa lagu sheegay in uu yahay Kubad Sameeyaha khadka dhexe ee Isco kaas oo uu soo gaaray dhaawac u baahan in qaliin looga sameeyo.
Xiddigaan oo 26 sano jir ah ayaa lacadeeyey in uu ka maqnaan doono Real Madrid kulamada ay lacayaari doonto kooxaha Sevilla iyo Atletico,Madrid waxaana maqnaashihiisu dhibaato ku noqon doonaa Naadiga boqortooyada.
Macalinka kooxda Real Madrid ayaa lasheegayaa in uu bilaabay fikirka sidii uu u buuxin lahaa booska uu banayn doono Isco in kasta oo aan sicad loo shaacin qoobta iyo xiliga uu dhici doono qaliinka lagu samayn doono.